Jereo ny tetika tsara indrindra hampitomboana ny volonao | Bezzia
Susana Garcia | 10/06/2021 20:00 | beauty, Fetsy hatsaran-tarehy
Matetika isika manapaka ny volo izahay ary saika maniry ny hitomboany indray avy hatrany hanana volo tsara tarehy indray. Na dia amin'izao fotoana izao aza ny volo dia anaovana be dia be amin'ny fahatapahana midi sy fohy, maro ny olona maniry ny hitomboan'ny volon'izy ireo mba hanana volo lava. Ka hahita tetika vitsivitsy isika amin'izay ity volo ity mba hitombo haingana kokoa ary hahazo volo lava hanaovana izay taovolo mahaliana.
Misy ny sasany fika hampitombo volo, na dia tsy maintsy tadidintsika aza fa ny volo dia manana halava voafaritra araka ny fototarazo ary miankina amin'ny olona tsirairay koa ny hafainganan'ny fitomboan'ny volo. Saingy ao anatin'ireo masontsivana ireo dia azontsika atao ny mampitombo ny volo ary manampy azy hitombo zavatra haingana sy matanjaka kokoa aza.
1 Aza manantena fahagagana
2 Mitandrema rehefa manasa azy ianao
3 Mampiasà rosemary
4 Raiso ny fanampin-tsakafo
Aza manantena fahagagana
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao fa tsy tokony hanantena fahagagana ianao, satria amin'ny ankapobeny ny volo tsirairay dia mitombo ary maniry manodidina ny iray centimetatra isam-bolana. Fa ao anatin'izany dia afaka manampy ny volo hitombo haingana kokoa sy amin'ny tanjaka bebe kokoa isika. Zava-dehibe ny tsy fananana fanantenana be loatra amin'ny fanjanahana amin'ny fotoana fohy. Raha manana hetsika isika ary te-hisehoseho volo dia afaka manararaotra ireo fanitarana lehibe foana.
Mitandrema rehefa manasa azy ianao
Ny fanasana dia a fahazarana izay tokony hanomezantsika ny lanjan'izany. Ilaina ny manasa volo mba hitomboany salama satria esorina amin'ny faritry ny hodi-doha ny loto, fa ny fanasana azy be loatra kosa dia mety hanimba azy sy hanimba ny hodi-doha, na dia hianjera na ho tapaka aza, izay hampiseho azy ho fohy sy tsy salama. Tokony hosasana amin'ny shampooing mety ianao, raha azo atao shampoo voajanahary izay tsy manala ny diloilo amin'ny volonao ary tsy manampy silikôla na parabens amin'ilay raikipohy. Sasao tsara ny volo eo amin'ny faritra misy ny loha, avelao ny savony hidina mankeny amin'ny faran'ny fa tsy kosehina.
El ny conditioner sy ny sarontava dia zava-dehibe hanalefaka ny volo ary karakarao ny tendrony, izay maniry ho maina bebe kokoa. Tokony hampiasaina isan'andro ny «conditioner» manasa ny volontsika, fa ny sarontava ihany no ampiasaina indraindray. Ireo vokatra ireo dia manampy antsika hikarakara ny tendrony ary hisorohana azy ireo tsy ho vaky sy handrava, ka mahatonga ny volo ho very ampahany amin'ny halavany mandritra izany.
Rosemary dia vokatra iray manampy ny volo hitombo tsara satria manampy amin'ny fanatsarana ny fivezivezena ao amin'ny faritra misy ny loha. Raha tsara ny fivezivezena, manondraka volo mampitombo ny volo maniry tsara kokoa. Misy vokatra sasany izay manana rosemary fa na ahoana na ahoana dia azonao atao ny manisy tsindrona ilay zavamaniry ary mampiasa an'io rano io hanorana ny hodi-dohanao. Tokony hataonao imbetsaka isan-kerinandro izany hanamarihana ny fanatsarana. Ho fanampin'izany, izany dia manampy ny volo hilatsaka kely amin'ny fotoana toy ny fararano. Hanampy amin'ny fanatsarana ny fivezivezena izany ary hampitombo haingana ny volo.
Raiso ny fanampin-tsakafo
Raha tsy mitombo ny volonao dia mety foana izany satria tsy ampy otrikaina ianao. ny Ny fanampiana volo dia mety ho fanampiana lehibe amin'ny fotoana Milatsaka izy io nefa koa rehefa mitombo, satria raha raisintsika izy ireo dia mihamatanjaka satria manana otrikaina ilaina izy. Betsaka ny famenon-tsakafo fa saika misy otrikaina avokoa toy ny zinc, vitamina B, vy na biotine, satria izy rehetra dia manampy amin'ny famolavolana ny volo sy ny fitomboany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Famitahana volo
Ahoana ny fomba fanesorana pimples avy any aoriana